Google မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရင် ဘာတွေထောက်ပံ့ပေးလဲ ? - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Knowledge Google မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရင် ဘာတွေထောက်ပံ့ပေးလဲ ?
Google မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရင် ဘာတွေထောက်ပံ့ပေးလဲ ?
Ever Cracker at 1:08:00 PM Knowledge,
Google ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတို့ ဝန်ထမ်းတွေကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့မှု ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ အဖြစ် စံချိန်တင်ထား ပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့ဆီက ဝန်ထမ်း တစ်ဦး လွယ်လွန်သွားရင် ယင်း ဝန်ထမ်းရဲ့ ကျန်ရှိ မိသားစုဟာ ၁၀ နှစ် တိတိ သူ့လစာ ရဲ့ တစ်ဝက် တိတိကို ခံစား ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ရပိုင်ခွင့် ကတော့ သားသမီး ရှိရင် သားသမီး အားလုံးကို အထက်တန်း ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ ထားပေးရပြီး ပညာတော်ရင် ပညာတော်သင် ဆုပါ ပေးပါသေးတယ်။ အကယ်၍ သားသမီးတို့ ရွေးချယ်တဲ့ ပညာရေး လမ်းကြောင်းဟာ Google ကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန် ရထူး တစ်ခုမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ သင့်တော် တယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်ဖို့ အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစား ပါသေးတယ်။
ဒ့ါအပြင် ဝန်ထမ်းတွေကို မွေးနေ့ရောက်ရင် ခရီးသွားခွင့်၊ ရက်ရှည် အနားယူခွင့် တို့ကို ပေးအပ်သေးပြီး မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေလည်း ပေးပါတယ်။ ရုံးထဲမှာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားလို့ ရအောင် ဖန်တီးထားပေးပြီး အပန်းဖြေဖို့ အတွက်